မလေးသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ခွင့် တစ်နှစ်နီးပါး ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် Calling ကျပြီး မသွားသူဦးရေ ထက်ဝ? - Yangon Media Group
မလေးသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ခွင့် တစ်နှစ်နီးပါး ပိတ်ထားခြင်းကြောင့် Calling ကျပြီး မသွားသူဦးရေ ထက်ဝ?
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ခွင့်အား တစ်နှစ်နီးပါး ပိတ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် Calling ကျပြီးသော်လည်း မသွားသူဦးရေမှာ ထက်ဝက်ကျော်ခန့်ရှိကြောင်း မြန်မာပြည်ပ အလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်မှသိရသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ရန် calling Visa ကျပြီး မသွားဖြစ်သူများအတွက် အစားထိုး Cancellation လုပ်ပြီး လုပ်သားအစားထိုး စေလွှတ်ခွင့်အား ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မှစတင်ကာ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ပုံမှန်အတိုင်း ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”calling Visa ကျပြီး မလေးရှားနိုင်ငံကို လုပ်သားစေလွှတ်ဖို့ကိစ္စ၊ အရေအတွက် တော့ အတိအကျမသိဘူး။ အရင်ကတော့ ပထမပြောထားတာက တစ်သောင်းဝန်းကျင် လောက်ရှိတယ်လို့ ပြောထားပေမယ့် တကယ့်တကယ်မှာ ပိတ်ထားတာ ဆယ်လလောက်ရှိတဲ့အတွက် မသွားကြတော့ဘူး။ မသွားတဲ့ သူက တစ်ဝက်ကျော်လောက်ခဲ့တယ်။ calling ကျထားတာက ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံး မှာရပ်လိုက်တဲ့အတွက် တစ်လပိုင်းကစပြီး စေ လွတ်ခွင့်ပိတ်လိုက်တာကြောင့် အဲဒီရှေ့ကျ ပြီးသားတွေကိုသာ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ ၁၂ လပိုင်းမှာ calling ကျဖို့လုပ်ထားတဲ့ ကလေး တွေက ၁၁ လပိုင်းလောက်မှာ ကတည်းက ကြိုတင်လုပ်ရတဲ့အတွက် တစ်နှစ်လောက်ဆို တော့ မစောင့်ကြတော့ဘူး။ တစ်ဝက်မကဘူး။ အရေအတွက် အတိအကျကို မပြောနိုင်ပေမယ့် သုံးပုံတစ်ပုံ၊ လေးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲသွား ကြလိမ့်မယ်”ဟု မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန် ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မှ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၂) ဦးမြတ်သူကပြောသည်။
ထိုသို့ Calling ကျပြီးသော်လည်း သွား ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိသည့် လုပ်သားအင် အားများပြားကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြန်လည် တင်ပြခဲ့ခြင်းကြောင့် Cancellation ဖြစ်သွားသူများနေရာတွင် အစားထိုးခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ”တချို့က စာအုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက သူများ ပိုက်ဆံချေးပြီး လုပ်ခဲ့ရတဲ့သူမျိုးတွေလဲရှိတယ်။ ၉ လ၊ ၁ဝ လလောက်ကြီး ပိတ်ထားတော့ သူတို့အနေနဲ့ ပတ်စပို့လုပ်တာနဲ့ သွေးစစ်တာ တို့အတွက်ကို နှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်း ချေးထားရလို့ မစောင့်နိုင်ကြလို့ ထိုင်းဘက်ကိုရွှေ့သွား ကြပြီ။ နိုင်ငံရေးမငြိမ် ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲ စိုးရိမ်ပြီး မသွားဖြစ်တာတွေလဲရှိတယ်။ ဟိုဘက်မှာ သက်တမ်းသေသွားတာကြောင့် အစားထိုးချင်လဲ ထိုးလို့မရတော့ဘူး။ ၁၈ လ အတွင်းမှာ အလုပ်သမားကလာချင်လာ၊ မလာရင် Calling လည်း လျှောက်လို့မရသလို လူစားလဲထိုးလို့မရတော့ဘူး။ ဘယ်နှစ်စောင်က လျှောက်လို့ရသေးလဲဆိုတာကတော့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (အလည)ကသာ တိုက်ရိုက်ကိုင်တာမို့ သေချာမသိဘူး” ဟု မလေးရှားကော်မတီ၏ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ကိုထွဋ်က ပြောသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ လုပ်သားစေလွှတ်ရေး ဈေးကွက်မှာ ကောင်းမွန်ပြီး တစ်လလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်သားလေးထောင်ကျော်ခန့် ရှိနေသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းတွင် တစ် ဝက်ခန့်ကျဆင်းခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့သာ အများ ဆုံး သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်း ပြည် ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ် အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲဆုရ အငြိမ့် အဖွဲ့သုံးဖွဲ့က
ရန်ကုန် ကလေးဆေးရုံကြီးတွင် ကလေး အသည်းအစားထိုး ကုသမှု ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အောင်မြင်
ဆေးလိပ်နှင့် အရက်အတွက် ပိုက်ဆံ အကုန်ခံမည့်အစား စာအုပ်ကောင်းများ ဝယ်ဖတ်ခြင်းနှင့် စာအုပ်လ??
ခေတ်အဆက်ဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းကို သင်ခန်းစာယူပြ??
တိုက်စစ်မှူး ထပ်ခေါ်ရန် တောင်းဆိုမည် မဟုတ်ကြောင်း နည်းပြဇီဒန်း ပြောဆို